I-Studio "La Vieille Cheminée" - I-Airbnb
I-Studio "La Vieille Cheminée"
Saint-André-de-Roquepertuis, Languedoc-Roussillon, i-France
U-Martina uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Senze konke okusemandleni ukugcina ubuntu bangempela begumbi elidala kunawo wonke lendlu yethu: izindonga zamatshe amakhulu emvelo, indawo evulekile yokupheka kanye nokufinyelela ngokuqondile kwi-terrace.
Résidence de l 'cacia – Maisonnette The "Résidence de l 'Acacia" inikeza abantu abathanda izindonga zamatshe ezindala endaweni yokuphumula kanye nokuzijabulisa kokuthola kwabo kwenye yezindawo ezikhangayo eningizimu ye-France.. Endlini yethu kunamafulethi atholakala ngosayizi abahlukahlukene. Sinikeza: amakhishi anakho konke okudingekayo okuziphekela, indawo yokuphumula ku-vault yamatshe emvelo; i-TV, i-billiards, i-ping pong, i-foosball; ilineni nokuqashwa kwamathawula; isevisi yokuhlanza
Edolobhaneni elincane e-Provence gardoise sinikeza amafulethi amaningana osayizi abahlukahlukene. Kule-studio abantu abangu-2 bahlala ngokunethezeka, endlini yonke singakwazi ukuhlalisa abantu abangaba ngu-40.
I-Résidence de l 'cacia yethu isendaweni ephakathi edolobhaneni kodwa ithule impela: lapha ungaphumula ngempela!
Amathala anelanga, ingadi enhle enendawo yokubhukuda, izindawo zokuphumula ezinomthunzi nezindawo ezinhle zokuphumula ngisho nasemndenini wonke. Izinto eziningi ezikhangayo ezifana ne-Avignon, i-Orange, i-Nimes, i-Gorges de la Cèze, i-Gorges de l 'Ardèche, i-Pont du Gard nezindawo zemidlalo ziseduze: ukuhamba ngesikebhe, ukucaca, ukugibela amahhashi, ukuhamba ngezinyawo, ukubhukuda, ukuhamba ngebhayisikili,.. ngisho nohambo oluya e-Mediterranean lubiza uhambo olungaphansi nje kwamakhilomitha angu-100 - inqwaba yamathuba!
Amashidi ombhede kanye/noma amathawula angaqashwa.
Yiqiniso, amafulethi ethu ahlanzisiswa kahle futhi abulawe amagciwane ngaphambi kokufika kwakho.
I- "Résidence de l 'Acacia" inikeza abantu abancamela izindonga zamatshe ezindala kuya ezakhiweni zehhotela ezingaziwa, isikhala sokuphumula kanye nokuzijabulisa kokuthola kwabo kwenye yezindawo ezikhangayo nezinhlobonhlobo eningizimu ye-France: e-Provence gardoise!
Ngokuvamile kukhona okungenani ilungu elilodwa lomndeni wethu endaweni, ngakho-ke kuhlale kukhona umuntu ongathintwa kusayithi ongaphendula imibuzo noma anikeze amathiphu ohambo.